‘राजनीतिक वातावरण निर्वाचन अनुकूल छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘राजनीतिक वातावरण निर्वाचन अनुकूल छ’
सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । सरकार मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधनबाहेक अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा मन्त्री पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजकको हैसियतले अध्ययन गर्दा प्रस्तावित स्थानीय तह कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
समग्रमा हेर्दा यो विषयवस्तु अलि जटिल, संवेदनशील र रणनीतिक रूपमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ । हामीले हेर्दा आयोगले सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरेको पाइयो । तर, प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत रहेका जिल्लामा जनताको प्रतिनिधि तहमा व्यापक छलफल गर्न नसकेका कारणले होला, त्यहाँ अलि मिल्दो देखिएको छैन ।
प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै ठाउँको राम्रो रहेछ ?
सबैको विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन । तर, सरसर्ती समग्रतामा देशलाई अघि बढाउनका लागि यो संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एकपल्ट यो संरचना खडा भइसके पनि कुन सिमाना कहाँ राख्ने, त्यसको नाम के राख्ने ? केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयचाहिँ स्थानीय जनतालाई निर्णय गर्न दिंदा नै राम्रो हुन्छ ।
तपाईंको कस्तो सुझाव आउँदै छ ?
अघिल्लोपटक हामीले सुझाव दिंदा नै प्रदेश नम्बर २ मा केही स्थानीय तहका इकाइ थप्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले २ नम्बर प्रदेशका सबै सांसदसँग छलफल गर्दा सबैको निष्कर्ष पनि यही थियो ।
तपाईंको आफ्नै सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको विषय मधेसमा स्थानीय तहको इकाइ थप्ने भन्ने नै छ । त्यसको आधारमा तपाईंहरू कति संख्या थप्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो हामीले मात्रै भन्ने विषयवस्तु परेन । शीर्ष राजनीतिक तहबाट सहमति गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले संख्या हामीले एकिन गरेका छैनौं । राजनीतिक तहमा कस्तोखालको दृष्टिकोण आउँछ, त्यसको पर्खाइमा हामी छौं । यीमध्येमा सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्डअनुसार इलाकालाई मुख्य आधार बनाउने भन्ने थियो । आयोग आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्डमा अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तहको इकाइ हुन सक्छ भन्ने थियो । अहिले उसले ७ सय १९ सिफारिस गर्‍यो । २५ संख्या त बाँकी नै छ । समग्रमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै बाँकी छ । पार्टीका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग हामी कुराकानीमै छौं ।
- आयोगले सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरेको पाइयो ।
- कुन सिमाना कहाँ राख्ने, त्यसको नाम के राख्ने ? केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयचाहिँ स्थानीय जनतालाई निर्णय गर्न दिंदा नै राम्रो हुन्छ ।
- सानो भूगोलको स्थानीय इकाइ बनाउँदा स्रोत र आम्दानी खुम्चिन्छ । जसका कारण विकास गर्न कठिनाइ पर्छ भन्ने छ ।
- संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान अब निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।
तपाईंले विज्ञहरूसँग पनि सुझाव लिनुभयो होला ? कस्ता खालका सुझाव आएका छन् ?
विज्ञहरूले सुझाव दिंदा भोलिको विकास, कर्मचारीका बारेमा हेर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ । अधिकांशको सुझाव भूगोल ठूलो लिनु भन्ने छ । जति ठूलो भूगोल लियो, त्यति विकासको सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने तर्क उहाँहरूको छ । मधेसका बारेमा कुरा गर्दा जनसंख्याका आधारमा लिनुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, सानो भूगोलको स्थानीय इकाइ बनाउँदा स्रोत र आम्दानी खुम्चिन्छ । जसका कारण विकास गर्न कठिनाइ पर्छ भन्ने छ । अर्को जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने छ ।
भनेपछि अहिलेसम्म तपाईंहरू प्रतिवेदन टुंग्याउनेतिर पुग्नुभएको छैन ?
विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ । अघिल्लोपटक पनि हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका हौं । यसपल्ट ठ्याक्कै कति संख्याको स्थानीय इकाइ थप्ने भन्ने ठोस धारणा बनाउन मात्रै बाँकी हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल पनि गरिरहनुभएको छ र हामी पनि छलफल अघि बढाइरहेका छौं ।
स्थानीय इकाइको संख्या बढ्दा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै सीमित हुन्छ कि मधेसको अन्य जिल्लामा पनि बढ्छ ?
अघिल्लोपटक दिएको सुझावमा मधेसका सबै भागमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले २ नम्बर प्रदेशका सांसदसँग मात्रै छलफल गरेका थिएनौं । मधेसी मोर्चा र गठबन्धनका नेतासँग पनि छलफल गरेका थियौं । हामीले जनताका सुझावलाई लिएका थियौं । समयको एकदमै चाप छ । एक वर्ष लगाएर ल्याएको प्रतिवेदनलाई हामीले १५ दिनमा टुग्याउने भन्ने विषय आफैंमा जटिल हो । तैपनि बिहानदेखि बेलुकासम्म मरिमेटेर लागेका छांै । तर पनि वैज्ञानिक रूपमा छिचोल्न गाह्रो छ । खासगरी निर्वाचनलाई हेरेर हामीले चाँडो काम सक्नुपर्नेछ ।
तपाईंहरू प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउनेतिर लाग्नुभएको हो ?
हामीले प्रदेश नम्बर २ मात्रै भनेका छैनौं । अघिल्लोपटक रिपोर्ट दिंदा पनि दुई नम्बर मात्रै भनेका थिएनौं ।
त्यसो भए प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै थप्ने या मधेस सबै ठाउँमा हेर्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरू नै अन्योलमा हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी ठ्याक्कै यसै भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । निष्कर्ष बनाउन बाँकी छ ।
तपाईंहरूलाई फागुन १६ सम्म सुझाव दिन भनिएको छ । त्यतिबेलासम्म काम सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने कोसिस छ ।
कोसष मात्रै ?
निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । त्यसैले छिटो प्रतिवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । दिन पनि धेरै छैन । सरकारले हामीलाई सात दिनको समय दिएको थियो, त्यसमध्ये तीन दिन सरकारी बिदा नै पर्‍यो ।
तपाईंहरूको सुझावअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाइएपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन सक्छ ?
निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचनमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भनेर सरकारले यो प्रयत्न गरिरहेको हो । जे भए नि हुन्छ भनेको भए त आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । यसैमा जान सकिन्थ्यो । तर, सबैलाई लिएर जानका लागि नै यो प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ ।
मधेसमा करिब २५ स्थानीय इकाइ थपिन सक्ने कुरा आएको छ । यस आधारमा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी होला ?
२५ वटा नै थप्ने भन्ने हाम्रो होइन । आयोगले अधिकतम यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने आधार लिएका कारण २५ संख्या बढाउन सकिन्छ भनिएको हो । तर, संख्या भन्ने विषय हामीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने विषय पनि होइन । कति संख्या बनाउने भन्ने विषय एउटा आधारमा हुनुपर्छ । हिमाल, मधेस र पहाडको अवस्था पनि हेरिनुपर्छ ।
जनसंख्याका आधारमा संख्या मिलाउने भनेपछि मधेसमा कति रहनुपर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूले हिसाब निकाल्नुभएको होला नि ?
ननिस्कने भन्ने त भएन । अहिलेसम्म समग्र कुराकानी गर्दा आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड, अन्य प्रदेशमा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भएको तर २ नम्बर प्रदेशमा छलफल पनि नभएको, आम मान्छेको भावना यी सबैलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषय संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन मागेको माग्यै छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन दिन सकिरहेको छैन । यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन र ?
हामीलाई जति समय सरकारले दिएको छ, त्यही समयमा प्रतिवेदन दिनका लागि मरिमेटेर काम गरेका छौं । अघिल्लोपटक पनि तोकिएकै समयमा दिएका हौं । अहिले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुन्न ।
निर्वाचनको मिति त तोक्ने तर कहाँ गएर निर्वाचन गर्ने भन्ने ठाउँ नहुने अवस्था भयो नि ?
सरकारले निरन्तर निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको सरसल्लाहबाटै यी सबै काम अघि बढाएको हो । मिति तोक्ने बेलामा पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेरै तोकिएको हो । छिटो टुंग्याउने काम हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचनमा नजाने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
राजनीतिक वातवरण नै क्रमश: बन्दै गएको छ । सदनमा रोकिरहेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर निर्वाचनका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर सुझाव लिनुभयो । मधेसी मोर्चाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकामा स्वागत गर्नुभयो । मोर्चाका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सरकारले हल गर्ने प्रयास गर्दै छ । त्यसैले राजनीतिक वातावरण पनि निर्वाचनका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ ।
मुख्य कुरा मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमै जान्नौं भन्ने मोर्चाको अडान छ नि ?
मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउनुपर्छ । अरू कुनै विकल्प छैन । विगतबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । सधैं अड्काएर, अड्किएर बसेर हुन्न । यो सरकार सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा लैजानका लागि प्रयत्नशील छ ।
संविधान संशोधन पारित हुने अवस्था त छैन नि ?
प्रक्रिया अघि बढेको छ । जो जसले जहाँ–जहाँ जे चाहिन्छ भन्छन्, त्यो सबै मिल्न सकेको छैन । हाम्रै दलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, सम्भव भएन । तर, हामीले यो विषयवस्तुलाई जनताका माझ लैजाने भनेर अघि बढयौं । यस्तो त भइरहन्छ ।
संसद्को अहिलेको अंकगणितमा संविधान संशोधन पारित हुने देखिन्न । पारित भएन भने मधेसी मोर्चा नआउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्छ ?
मोर्चाले आफ्नो विषयवस्तु पनि राख्दै आएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । सँगै छलफल पनि भइरहेको छ । मधेसी मोर्चामा सहभागी दलहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ । जनता निर्वाचन चाहन्छन् । मोर्चाका नेताहरूले पनि जनताको चाहनाअनुसारको निर्वाचन छाड्दैनन् ।
मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनेबारेमा सरकारले केके गृहकार्य गरिरहेको छ ?
मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधनकै विषय हो । यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार लचक भएर पनि संविधान संशोधनमा जोड दिंदै आएको छ । संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइबाट पारित गर्ने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ । दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो । तेस्रो विषय स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सभा गठनको निर्वाचन मण्डलबाट अलग्याइनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।
निर्वाचनका लागि अब ७५ दिन मात्रै बाँकी छ । यी सबै राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाएर निर्वाचनमा जानका लागि समयले भ्याउँछ जस्तो लाग्छ ?
समय थोरै छ । तर, नपुग्ने भन्ने होइन । सरकारले माघ २० गते नै निर्वाचनका लागि अघि बढ भनेर लेखेरै दिएको हो । त्यतिबेलैदेखि तयारी गरेको हो । सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउन सर्वदलीय छलफल पनि गरिसक्यो । संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान अब निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७३ ०८:२१
‘कसैले चाहँदैमा चुनाव रोकिँदैन’
बुटवल — कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कसैले चाहँदैमा स्थानीय तहको चुनाव नरोकिने बताएका छन् । बीपी स्मृति भवन उद्घाटन गर्दै उनले निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
‘निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू पनि तयारीमा लाग्नुस् ।’ देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि सबै नागरिकले भयरहित वातावरणमा चुनावमा भाग लिने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
‘सबै नेपालीलाई जुटाएर लैजान चुनाव आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय चुनावले कांग्रेसलाई पुन: ठूलो पार्टी र जनतालाई सच्चा मालिक बनाउने अवसर जुटाउनेछ ।’ आगामी माघभित्र तीनै तहका चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
देउवाले चुनावको वातावरण बिथोल्न, नेपाली बीचको एकता भाँड्न र पहाडी–मधेसीबीच झगडा गराउन विभिन्न षडयन्त्र भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘देशमा अतिवादी हाबी भएका छन् । यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यस्तो बेला फुटेर होइन जुटेर मात्रै हित हुन्छ,’ उनले भने ।
हिमाल र पहाडमा बस्ने मात्रै होइन, देशको सीमा रक्षा गर्ने मधेसीका पक्षमा समेत कांग्रेसले काम गर्ने देउवाको भनाइ छ । विकास निर्माणका प्रत्यक्ष क्रियाकलाप स्थानीय निकायबाट हुने भएकाले कांग्रेसले अगुवाइ गर्ने वातावरण बनाउन उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाडले सबैका माग सम्बोधन गरेर पनि समयमै चुनाव हुने बताए ।
‘चुनाव गराए सहयोग’
पर्वत (कास)– एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानको मर्मअनुसार आगामी माघ ७ सम्ममा तीनवटै निर्वाचन गराए एमालेले सहयोग गर्ने बताएका छन् । शनिबार प्रेस चौतारी पर्वतले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले समयमै निर्वाचन गराएर मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गर्न कांग्रेस–माओवादीलाई आग्रह गरे ।
‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने गठबन्धन सरकारको कुर्सी धानिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको जनादेशले फरक मोड लिनेछ । हामी पहिलो शक्ति बन्नेमा कुनै शंका छैन ।’ चुनावको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा अब सरकार कुनै पनि बहाना बनाएर पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । चुनाव गराउन नसके पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको औचित्य समाप्त हुने उनले बताए । ‘अब चुनावविपरीत कदम चाल्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।